Miino ladhigay duleedka Muqdisho oo ay Fashiliyeen Booliska Soomaaliya
By Caalamka On Oct 6, 2019
Saraakiisha Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa sheegay. In ay fashiliyeen Miino nooca Dhulka lagu aaso oo la dhigay. Inta u dhaxaysa Siinka Dheer iyo Ceelasha Biyaha ee duleedka Magalada Muqdisho. Sida ay baahisay Warbaahinta Dowladda Soomaaliya.
Qoraal kooban oo ay baahisay Warbaahinta Dowlada. Ayaa lagu sheegay in Ciidanka Booliska gaar ah oo ay tababartay Dowlada Turkiga ay fashiliyeen. Qarax miino la galiyay iinta u dhaxaysa Siinka Dheer iyo Ceelasha Biyaha ee duleedka Magalada Muqdisho.
“Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad. Ayaa fashiliyay Miino nooca Dhulka lagu aaso oo la dhigay inta u dhaxaysa Siinka Dheer iyo Ceelasha Biyaha.” ayaa lugu yiri qoraalka ka soo baxay Dowlada Soomaaliya.
Dadka degaanka ayaa ciidanka ku soo wargaliyay in Al-Shabaab wadada dhinaceeda ku aaseen qaraxa isla markaa ciidanka oo si dhaqso ah uga jawaabay fariintaa ay shacabka ka heleen,iyaga oo miinada soo saaray sida ay sheegeen saraakiisha amaanka.
Saraakiil Ciidan ayaa sidoo kale Warbaahinta dowladda waxaa ay u sheegeen in Ciidamadu qarxiyeen miinada,kadib markii ay dadka ka fogeeyeen goobta lagu Aasay iyada oo dib loo furay wada oo mudaa la hakiyay isku socodka gaadiid iyo dadkaba.